Epson WorkForce WF-7610 ny rehetra
Epson's PrecisionCore printhead alternative, format format office space
Tany am-piandohan'ity volana ity (jiona 2014), ny solosaina Epson dia nanolo ny tsipiky ny WorkForce multifunction (print / scan / copy / fax) fanontam-pirinty fanontam-pirinty miaraka amin'ny milina mifototra amin'ny new PrecisionCore an'ny orinasa (amin'ity tranga ity). Ny tontolon'ny PageWide , izay mitovy amin'ny HP print izay mitovy hevitra, izay nanjaka tao amin'ny orinasan'ny Officejet X multifunction ao midi 2013 dia tsy vitan'ny haingana sy mora kokoa ampiasaina ny printers PrecisionCore noho ny tsy vitan'ny modely ampiasain'i Epson tamin'ny WorkForce, fa koa ny laser class mpanonta. (Ho an'ny fanoritsoran'ny printsy printhead hafa sy ny antony maha-ambony kokoa ny inkjets standard sy ny laser mpanaraka azy, dia jereo ity lahatsoratra " Alternative Printhead Inkjet Printers " ity.)
Nolazain'izy rehetra fa i Epson dia namoaka modely maimaim-poana maimaim-poana maimaim-poana maimaim-poana, maimaim-poana amin'ny $ 200 fidirana an-tsehatra, ambany baolina hatramin'ny $ 400 pirinty avo lenta. Eto aho dia mijery ny $ 249.99 (lisitra) WorkForce WF-7610 All-in-One Printer, iray amin'ny roa lehibe (13x19 santimetatra) Modely WorkForce. Ny iray hafa, ny WF-7620, dia mivarotra $ 299.99 (lisitra), izay, ho an'ny 50 $ fanampiny, dia tonga miaraka amin'ny drafitra fanangonana 250 fanampiny, ho an'ny loharanon-kevitra telo voalohany: ary tavoahangy 250 lava miakatra eo anoloana, mba hahazoana tarehimarika 500 isa.
Ny WF-7610, etsy ankilany, dia misy takelaka 250-sheet iray ihany ary misy takelaka tokan-drakitra mihantona ao aoriana. Ny tombony azo avy amin'ny tabilao tokana dia azonao atao pirinty amin'ny haino aman-jery manokana iray manokana, toy ny valopy, na angamba sary vita amin'ny sary, tsy mila mamoaka sy mampifanaraka ny pensée maina.
Satria, ankoatra ny fanontam-pirinty PrecisionCore, ny WF-7610 koa dia milina manova endrika afaka manonta pejy hatramin'ny 13x16 santimetatra, tsy maintsy ho lehibe-22.3x32.2x13.4 (WxDxH) inches. Ary lanjany mihoatra ny 40 kilao. Na dia lehibe loatra aza ny mipetraka eo amin'ny tontolon'ny ordinatera, izy io koa dia entina miaraka amin'ny famokarana maimaim-poana sy ny karazam-pitaovana azo ampiasaina, anisan'izany ny fanodinana doka automatique duplex izay afaka mamaky, manaparitaka, ary mandefa pejy miisa 11x17, fantatra ihany koa amin'ny habeny .
Ny WF-7610 ihany koa dia asiana karazam-panampiana hanampy anao sy ny ekipan'ny birao amin'ny alàlan'ny fitaovana finday, toy ny Cloud Cloud Print, ny AirPrint an'ny Apple, ary ny Wi-Fi Direct, saingy tsy misy fifandraisana akaiky eo akaikin'ny saha (NFC) avy amin'ny finday sy takelaka. Raha tsy fantatrao amin'ny endri-dàlan'ny fanontam-pirintin'ny andro androany, tsidiho ity lahatsoratra ity momba ny "Printversion Mobile Version - 2014 ".
Hahita ihany koa ianao, amin'ny alalàn'ny WF-7610 amin'ny loko lehibe sy marevaka 4.3-inch mofomamy, maro karazana PC-maimaim-poana , toy ny fahafahana manonta avy sy mijery amin'ny fitaovana maro samihafa, toy ny karatra SD sy USB mpanodinkodina USB. Avy eo, misy ny fampiharana finday Epson Connect, izay ahafahanao manonta mivantana avy amin'ny iPads, iPhones, ary Android fitaovana.
Ny tombontsoa voalohany amin'ny printhead PrecisionCore dia ny mamela ny inkjet mba hahatratrarana sy matetika mitazona ny haingon-drivotra laser lasantsara. Epson dia mihevitra ny WF-7610 amin'ny 18 pejy isa-minitra (ppm) ho an'ny printy mainty sy fotsy, ary 10ppm ho an'ny pejy loko. Raha mbola tsy nahavita nanatratra izany haingana izany aho, inona no azoko lazaina fa ity masera WorkForce ity dia haingana kokoa noho ny taloha, ary eny, haingana kokoa noho ny milina laser laser amin'ny fidirana. Tsy izany anefa, na dia ny antsasaky ny haingana toy ny modely amin'ny Officejet X HP. Saingy dia mitentina avo telo heny noho ny an'ny Epson ireo milina fandraharahana avo lenta ireo.
Ho fanontana ny kalitao, ny WF-7610 dia nanonta ireo tahirin-tsarimihetsika momba ny fandraharahana sy sary ary koa ny karazan-jiro rehetra hitako hitako, anisan'izany ny milina PageWide HP. Raha ny marina, dia vita pirinty sary izy io-na oviana na oviana ny sary 13x16-inches, tsara tarehy tsara. Raha avo lenta amin'ny lisitry ny fanirianao ny endri-tsoratra manokana, dia tsy handiso fanantenana ity modely momba ny BusinessFactory ity.
Ny iray amin'ireo endri-javatra mahavariana indrindra amin'ny prints an'ny PageWide HP dia ny vidiny miavaka ho an'ny pejy tsirairay , na ny CPP - ny tsara indrindra fantatro amin'ny inkjet. Saingy, indray, ireto Modely Officejet X ireto dia mitombo be lavitra noho ity masinina WorkForce ity. Ny WF-7610 dia afaka mandefa pejy miisa 3.2 tapitrisa ho an'ny pejy fotsy mainty sy fotsy, ary 11.3 cents ny vidin'ny ink cartridge izay nividiananao azy, ny Standard, High, ary Extra High (izay tsy misy afa-maina). for color.
Raha, raha ampitahaina amin'ny printseran'ny laser-lenta midadasika amin'ny $ 300 sy $ 400, ary koa ireo modely maro samihafa amin'ny vidiny, dia ambany ny CPPs an'ny WF-7610, tsy misy eo akaikin'izy ireo manodidina ny 40 ka hatramin'ny 50 isan-jato eo ambany izany. Epson milaza. Ny lasitra laser-hcl classe HL-3170CDW amin'ny fidirana, ohatra, dia mamoaka sary miloko miaraka amin'ny tonon-tonon-tavoahangy avo lenta miisa 14 eo ho eo. Raha maro ny printy, ny CPP an'ny printer dia, araka izay noresahana tao amin'ny "About.com Printer " $ 150 , dia mety ho sarobidy aminao ny fotoana.
Rehefa nilaza tamiko i Epson fa nanolo ny endri-tsoratr'ireo mpanonta kely sy maitso maoderina miaraka amin'ny modely amin'ny PrecisionCore printhead ry zareo, dia nanantena fa ny milina dia misy CPP ambany noho ity. Indrisy, amin'izao vidin'ny fividianana izao, mbola mijery milina isika izay mamorona ny ankamaroan'ny fidiram-bola amin'ny alàlan'ny varotra. Na dia diso fanantenana aza ny CPPs, dia mbola tsara lavitra noho ny ankabeazan'ny fifaninanana izy ireo, ary ny printsy PrecisionCore tsara dia tsara.
Epson's PhotoMate PM-400 Personal Lab Lab
Ny 8 Best Office Multifunction Printers mba hividy amin'ny 2018
Review: Canon's Pixma MG7720 Photo All-in-One Printer
Review: HP OfficeJet 4650 All-in-One Printer
Pocket Mechanic: BlueDriver Diagnostics On Board
Canon Pixma MG6620 Photo All-in-One Printer
HP Envoyer 5660 e-All-in-One Printer
Inona ny rakitra MODD?
AirDrop tsy miasa? 5 Torohevitra Hanaraka Anao Indray
NAD T748 Home Theater Receiver - Sary Profile
Ny fahasamihafana eo amin'ny 720p, 1080i, 1080p, 4K HDTVs
Ahoana ny fomba hanakanana Spyware amin'ny 5 Easy Steps
Araho ny fitsipika Google AdSense ao amin'ny blôginao-na hafa
5-n'ny taranaka iPod Apple Nano Review
10 Marika matotra hampiditra Snapchat
Apps ho an'ny horonantsary malalaka amin'ny ordinateranao
Ny farany amin'ny GPS GPS Devices
Ahoana no hanaisotra Apps avy amin'ny iPhone?
Ahoana no Mamorona Android Drive Android
Fepetra fanodikodinam-baravaran'ny tranonkala Network Router
Ahoana no fomba amam-panao ny iPad?
Mitantana ny Smart Search amin'ny Safari ho an'ny OS X sy macOS Sierra
6 Fitaovana hilalao FLAC amin'ny iTunes sy iOS